Somaliland oo shuruud ku xirtay ka laabashada Go'aankii ay ka gaareen QM - Awdinle Online
Somaliland oo shuruud ku xirtay ka laabashada Go’aankii ay ka gaareen QM
Madaxweyaha Somaliland Muuse Biixi cabdi ayaa markael ka hadlay go’aankii Soomaaliland ku hakisay wada-shaqeyntii Hay’adaah Qaramada Midobay iyo sida lagu soo celin karo.
Waxaa uu Madaxweyne Muuse Biixi ka dalbaday Madaxda Hay’adaha Qaramada Midoobay inay marka hore ula macaamilaan Soomaaliland sida dal madax bannaan oo kale, dib loogu soo celiyo howlihii ay ka wadeen degaannada Soomalailand.
Hay’adaha Qaramada Midoobay ayuu Madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyay inay Amaro ka qaataan dowladda Soomaaliya, isla markaana ay saameyn ku yeeshaan Arrimo la xiriira Siyaasadda.
Isaga oo sii hadalayay ayaa waxaa uu sheegay in Wakiilka QM uusan metelin Soomaaliland, hayeeshee ay soo dhaweynayaan cid kasto oo dooneysa in si sax ah loola Shaqeeyo, iyada oo aan wax siyaasad ah ku jirin.
Dhawaan ayaa Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliland qoraal ay soo saartay waxaa ay ku sheegtay in la hakiyay wada-shaqeyntii iyo howlihii degaannada Somaliland ka wadeen Hay’adaha QM, waxaana tallaabadaas ay u qaadeen Somaliland sababo la xiriira heshiiskii ay dhawaan QM & dowladda Somalia Muqdisho ku saxiixdeen.
Previous articleSheekh Shariif oo gaaray Magaalada jowhar & Madax soo dhaweysay
Next articleKhasaaro ka dhashay dab ka kacay xaafad ka tirsan Muqdisho